Tag: warbixinta | Martech Zone
Maaddaama qalab aad iyo aad u badan ay ku jiraan iibkaaga iyo suuqgeynta suuqgeynta, soo saarista warbixinnada dhexe waxay noqon kartaa shaqo culus. Inta badan suuqleyda aan ogahay waxay waqti badan ku qaataan ururinta iyo badalida xogta, ka dibna gacanta ku soo saaraan warbixinnada ay u baahan yihiin inay kaga warbixiyaan ololaha iyo cabbirada kale ee suuqgeynta. Masaf: Isku-darka in ka badan 500 oo ilo xog ah Faanku wuxuu qaataa xog qasan, oo laga kaydiyey dhammaan ilaha si si otomaatig ah loo soo saaro Xog-Diyaarsan Ganacsi oo si buuxda isula jaanqaaday, cusbooneysiiyey, iyo
Waxaa jira isbeddello ka dhex jira warshadaha suuqgeynta dijitaalka ah ee aan indha indheyn ku sameyneyno oo durba saameyn ku leh miisaaniyadda iyo ilaha - waana sii socon doontaa mustaqbalka. Marka laga eego dhinaca maalgashiga, miisaaniyadaha adeegyada suuqgeynta ayaa waxyar kori doona sanadka 2016, illaa 1.5% wadarta dakhliga adeegyada. Kordhinta ayaa dib u dhigi doonta koritaanka la filayo ee dakhliga adeegyada, hase yeeshe, iyadoo weli cadaadis dheeri ah saareysa suuqleyda si loo ballaariyo baaxadda iyo waxqabadka kaliya ilaha ugu yar ee dheeri ah.